उत्पादन परिचय: यो ऊन को कपडा तातो हुड हो, यसले छाला बन्द कपडा प्रयोग गर्दछ, न्यानो र तातो भण्डारण राख्दछ, पिलि not्ग गर्दैन। यससँग निम्न विशेषताहरू छन्: न्यानो साबर फेब्रिक, विन्डप्रूफ र लक तापमान, नरम र आरामदायक, डस्टप्रूफ र फोग-प्रुफ, अधिक गाढा र नरम। जाडोमा, जब मौसम चिसो हुन्छ, के तपाइँ हरेक पटक बाहिर जानुहुने शीतदंशबाट पीडित हुनुहुन्छ? चाहे तपाइँ जाडोमा बाइक चलाउनुहोस, काममा जानुहोस्, वा साथीहरूसँग बाहिर खेल खेल्नुहोस्, तपाईंको टाउको वास्तवमै ...
यो ऊनको कपडा तातो हुड हो, यसले छाला बन्द कपडा प्रयोग गर्दछ, तातो र तातो भण्डारण राख्दै, पिलि not्ग गर्दैन। यससँग निम्न विशेषताहरू छन्: न्यानो साबर फेब्रिक, विन्डप्रूफ र लक तापमान, नरम र आरामदायक, डस्टप्रूफ र फोग-प्रुफ, अधिक गाढा र नरम। जाडोमा, जब मौसम चिसो हुन्छ, के तपाइँ हरेक पटक बाहिर जानुहुने शीतदंशबाट पीडित हुनुहुन्छ? चाहे तपाइँ जाडोमा बाइक चलाउनुहुन्छ, काम गर्न जानुहुन्छ, वा साथीहरू बाहिर खेल खेल्नुहुन्छ, तपाईको टाउकोमा चिसो बतास र कडा हिउँले चोट पुर्‍याउने जोखिममा छ। यो ऊन हुड यस समस्याको लागि एक महान समाधान हो। सर्वप्रथम, यसले भित्री ऊनको कपडा प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तपाईं चिसो जाडोमा पनि चिसो हावाको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, तातो र चिसो प्रतिरोधी राख्न सक्नुहुन्छ। उसको टाउको वसन्त झैं न्यानो थियो। यस बाहेक, यो कपडा राम्रो लोच र कडाई, सुविधाजनक ढाँचा डिजाइन, अधिक आरामदायक र विकृति गर्न सजिलो छैन संग उच्च लोचदार कपडा छ। दोस्रो, यसको त्रि-आयामिक चारैतिरको डिजाइन अनुहार र टाउको राम्रोसँग फिट गर्न सक्दछ, राम्रो तापक्रम प्राप्त गर्न, ताप, लक र हावालाई प्रतिरोधी, सहज र भरिएको छैन। तपाईं यसलाई हेलमेटको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यस कपडाको मुख्य सुविधाहरू: पाइलाइ गर्न सजिलो छैन र धोउन सकिदैन। थप रूपमा, यसको विस्तारित विन्डशील्ड डिजाइन पनि उत्कृष्ट छ। लामो लामो छाती डिजाईनले गर्दन र सर्फमा सर्दा वा बाहिर जाँदा घाँटी र फोर-चेस्टको हावामा प्रवेश गर्ने हावालाई कम गर्न सक्दछ। डबल-थ्रेड सिलाई: यो हुडले डबल-थ्रेड सिलाई विधि अपनाउँदछ, स्वच्छ र कम्प्याक्ट, फर्म हो र थ्रेड गर्न सजिलो छैन, हुडको सेवा जीवनलाई बढाउने।
अर्को एउटा विशेषता बहुउद्देश्यीय पोशाक विधि हो, विभिन्न प्रकारका प्रयोगहरू, यसलाई हेलमेटको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ; यदि तपाईंलाई शान्त हुन आवश्यक छ भने, मास्कलाई तल तान्नुहोस्। तपाईं हुडलाई तल तान्न र यसलाई मास्कको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, शरद र जाडोमा सवारीमा, न्यानो राख्नु नै पहिलो विकल्प हो। एक किफायती र उपयोगिता ऊन उष्ण वायुप्रूफ सवारी हुड पक्कै तपाइँको पहिलो विकल्प हो।
कृपया प्रत्येक पटक प्रयोग गरेपछि यसलाई सफा गर्न नोट गर्नुहोस्।
अघिल्लो: बेस बल टोपी
अर्को: फ्लैट ब्रिम टोपी